छोराले मात्रै गर्नुपर्ने मान्यतालाइ तो’ड्दै, आमाको कि’रि’या आफै गर्दै छिन यी १६ बर्षिय कि’शोरी ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/छोराले मात्रै गर्नुपर्ने मान्यतालाइ तो’ड्दै, आमाको कि’रि’या आफै गर्दै छिन यी १६ बर्षिय कि’शोरी !
छोराले मात्रै गर्नुपर्ने मान्यतालाइ तो’ड्दै, आमाको कि’रि’या आफै गर्दै छिन यी १६ बर्षिय कि’शोरी !
लेटाङ / मोरङको लेटाङ नगरपालिका २ धोवीकी १६ वर्षिय एक किशोरीले छोराले मात्र आमा बाबुको का’जकिरिया गर्छन भन्ने मान्यतालाई तोडदै ७ दिन अघि देखि आफनो आमाको का’जकिरिया गरि रहेकी छिन।
१६ वर्षिय रोजिना मल्ल ठकुरीले आफनो आमा मुगा कुमारी मल्लको नि’धन पश्चात का’जकिरिया गर्दै आएकी हुन् । आफू एक्लो सन्तान भएको र छोरा नभए पनि केही फरक नपर्ने भन्दै सेतो वस्त्र लगाएर छोरा सरह कोरामा बस्दै आएकी हुन् शो’काकूल मल्ल परिवारले जनाएको छ ।
आफू एक्लो सन्तान भएको र छोरा नभए पनि केही फरक नपर्ने भन्दै सेतो वस्त्र लगाएर छोरा सरह कोरामा बस्दै आएकी हुन् ।
२०७७ असार ३ गते आमाको नि’धन पछि कोरामा को बस्ने भनेर धेरै सल्लाह भयो । छोरा नभएका कारण वृद्धावस्थाका रोगी बाबुले नै गर्नुपर्छ भनेर धेरैले द’बाब दिदै गर्दा आमाको का’जकिरिया ससुरा बुबालाई गर्न लगाउनु भन्दा आफू नै बस्न उचित ठानेर छोरीले नै कोरामा बस्ने निर्णय गरेपछि उनले का’जकिरिया गर्दै आएकी हुन् ।
शुष्मा कार्की भन्छिन् ‘फे’क आईडीबाट आफैले गा’ली गौ’लोज किन गर्नु, के पूजा मात्रै नेपालकी सेलिब्रेटी हुन् ?(भिडियो)
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा यतिबेला अभिनेत्रीद्धय पूजा शर्मा र शुष्मा कार्कीको यु’द्ध छे’डिएको छ । सार्वजनिक रुपमा पूजाले खासै न’बोलेपनि शुष्मा खु’लेआम रुपमा पूजा बि’रुद्ध बोली रहेकी छिन् । आखिरमा पूजासंग शुष्माको कहां चि’त्त बु’झेको छैन् र बारम्बार यी दुई अभिनेत्रीहरु आ’मनेसाम्ने भैईरहन्छन् ।
केही समय अघि एक अन्तरबार्तामा शुष्मा कार्कीले अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र पुजाले फ्यानका नाममा आफै सामाजिक सञ्जाल चलाउने र त्यसमा आफ्नो प्र’शंसा आफै गर्ने गरेको दा’वी गरेकी थिइन् । य’द्धपि यी २ को सम्बन्धमा फाटो आएको पनि सो अन्तरबार्ता अगाडी देखि नै हो ।
सोही पेजवाट आफुलाई न’कारात्मक टि’प्पणी समेत गरिएको उनको दा’वी थियो । शुष्माले आफूलाई ब’दनाम गर्न र कलाकारसँग आफ्नो सम्बन्ध बि’गार्न केही मानिसहरू ला’गिपरेको पनि टि’प्पणी गरेकी छन् । हालै शुष्माले पूजा शर्मालाई पुनः आ’रोप लगाएकी छिन् ।
शुष्माले भनेकी छिन् के पूजा मात्रै नेपालकी सेलिब्रेटी हुन्? आखिर किन उनी बि’रुद्ध बो’ल्दा फे’क आईडीबाट त’थानाम गा’ली गौ’लोज आउंने गर्छन् । जसलाई शुष्माले आफ्नो मोबाईलबाट प्र’माणित गरेको बताएकी छिन् ।
लकडाउनमा २०० किलोमिटर पैदल हिँडेर ज्यान गु’माउने रणवीरको त्यो अन्तिम फोन…
एउटै व्यक्ति’लाई मलेरिया, डेंगु र कोरोना! उनैलाई कोब्रा-सर्पले पनि टोक्यो..
झापामा एक पुरुषको घाँटी काटेर हत्या
खुशीको खबर : विश्वकै पहिलो कोरोना भ्याक्सिन आज आउँदै